आज तेस्रो पोखरा स्पोर्टस अवार्ड - Kheladi News Kheladi News
आज तेस्रो पोखरा स्पोर्टस अवार्ड
जेठ १८ गते २०७५ मा प्रकाशित
पोखरा(खेलाडी न्युज)-आज स्पोर्टस अवार्ड । तीन खेलाडी र एक प्रशिक्षक पुरस्कृत हुने छन् । संघको पुरस्कार भने व्याडमिन्टन संघलाई प्रदान गर्ने यसअघि नै निर्णय भईसकेको छ । लाईफ टाईम अचिभमेन्ट अवार्ड भने कास्कीमा हकी र क्रिकेटको जग बसाल्ने प्रा. डा. विरेन्द्रसिंह गुरुङलाई प्रदान गर्ने खेलकुद पत्रकार मन्च कास्कीले निर्णय गरिसकेको छ ।
खेलकुद पत्रकार मन्च कास्कीद्वारा आयोजित अवार्ड तेस्रो सस्करण हो । पोखरा स्पोटर््स् अवार्डको सर्वोत्कृष्ट वर्ष खेलाडी पुरुषमा कमलबहादुर भण्डारी (शारिरिक सुगठन), करण केसी (क्रिकेट) र तिलक पुन मगर (आर्चरी) छन् । सर्वोत्कृष्ट वर्ष खेलाडी महिलातर्फ बिमला नेपाली (सितेरियो कराँते), कमला पुन (हक्की) र केशरी आले मगर (आर्चरी) मनोयनमा अटेका छन् ।
वर्ष उत्कृष्ट उदीयमान खेलाडीतर्फ विवेक अधिकारी (एथ्लेटिक्स), बुद्धिमाया मगर ‘कविता’ (कबड्डी) मेखबहादुर सेन (क्रिकेट) मनोनित छन् । वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षक बिधामा जीवन घिमिरे (शारीरिक सुगठन), रिजन प्रजु (क्रिकेट) र शिवबहादुर गुरुङ (फुल कन्ट्याक्ट कराँते) मनोनयनमा परेका छन् ।
तीन खेलाडी र एक प्रशिक्षकले पुरस्कार थाप्ने प्रतिक्षामा हुने छन् । सबैले चासोको विषय नै स्पोर्टस अवार्ड बनेको छ । तेस्रो टिभिएस पोखरा स्पोर्ट्स् अवार्ड २०७४ को पुरस्कारसँगै मन्चले वर्षदिन विश्राम लिने छ । पूर्वसन्ध्यामा मुख्य प्रायोजक बतास ब्रदर्श प्रा.लि. र आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च कास्कीले विहीबार बिहान पोखरामा ¥याली निकाल्यो । युवाहरुमाझ लोकप्रिय टिभिएसको उत्पादन जुपिटर भर्सन २ र अपाचे आरटीआर २०० लिएर झण्डै ५० खेलाडीहरु ¥यालीमा सहभागी भए । बतास ब्रदर्श प्रालि.को कार्यालय नयाँबजारबाट सुरु भएको टिभिएस ¥याली महेन्द्रपुल, चिप्लेढुंगा, सभागृहचोक, सृजनाचोक, हल्लनचोक, लेकसाइड, राष्ट्रबैंकचोक, विरौटाचोक, पृथ्वीचोक हुँदै पुनः कार्यालयमै पुगेर समापन भएको थियो ।
अवार्ड कार्यक्रमको युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले उदघाटन गर्ने छन् । विजेताहरुले टिभिएस अपाचे मोटरसाइकल, टिभिएस विगो स्कुटर, नगद, ट्रफी लगायत पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । एक जना पत्रकारलाई खेल पर्यटन पत्रकारिता पुरस्कार समेत अर्पण गरिनेछ । पोखरेली गायक बिनोद बानियाँलाई समेत सम्मान गरिनेछ । उदियमान खेलाडी र सम्मानित पत्रकारलाई वल्र्डवाइड कनेक्सन चिप्लेढुंगाको तर्फबाट एक÷एक थान सामसुङ कम्पनीको आकर्षक मोबाइल समेत प्रदान गरिनेछ ।